Swaarm: Toos u hagaaji, kor u qaad, oo Cabir Waxqabadkaaga Xayeysiinta | Martech Zone
Swaarm waa goob waxqabad ku saleysan waxqabad ku saleysan oo siisa wakaaladaha, xayeysiiyaasha, iyo shabakadaha awood u leh inay si buuxda ula socdaan oo ay u xakameeyaan dadaalkooda suuq geynta waqtiga dhabta ah ee xaqiijinta kobaca faa'iido leh.
Barxada ayaa laga soo saaray dhulka hoostiisa si ay u fududaato in la isticmaalo, hadana awood badan, iyadoo la adeegsanayo otomaatiga ololaha ee xogta ku saleysan si ay uga caawiso suuqleyda inay si guul leh u cabbiraan una wanaajiyaan ololayaasha qiimaha dhaqaale.
Halkii aan ka sameyn lahayn hoos-u-dejin, waxaan ka dhignay sheygan gundhig. Isla markii ugu horaysay, waxaan bilaabay tijaabinta macaamiisha dhabta ah si ficil kasta looga dhigo mid fudud, dhaqso leh, oo ka sii fiican. Sida iOS iyo Android ay ugu jiraan taleefannadeena, waxaan ku hanweynahay inaan noqonno Nidaamka Howlgalka ee Suuqgeynta Waxqabadka.
Yogeeta Chainani, Aasaasihii iyo CPO ee Swaarm
Furitaanka qiimaha xogta, Swaarm waa xal midaysan, kaas oo shirkaddu ujeedadeedu tahay inay xalliso qaar ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee warshadaha ee kobcinta ganacsiyada. In kasta oo bixinta hadda jirta ay kaliya bixiso aragtiyo xog xaddidan, haddana wali waxay u baahan tahay geeddi-socod shaqo oo wax ku ool ah, oo ay la yimaadaan moodello qiimeyn aan fiicnayn, Swaarm waxaa loo dhisay in laga gudbo qodobbada xanuunka. Mashruucu wuxuu u oggolaanayaa shirkadaha inay gaaraan go'aanno xog-ku-saleysan oo ay ganacsigooda ku qiimeeyaan qiimo ka fiican iyagoo soo bandhigaya heerka ugu sarreeya ee otomaatiga.
Waxaan hoos u dhignay qarashkeena raadinta ilaa seddex meelood meel anagoo u dhaqaaqnay Swaarm. Isla mar ahaantaana, aaladaha otomatiga waxay naga caawiyeen inaan kor u qaadno waxqabadkeena taasoo keentay kor u qaadista dakhliga ee 20%. ”
Thorsten Russ, Agaasimaha Maamulka, Evvolution
Astaamaha Swaarm Performance Suuq Ku dar
Swaarm waxay daboolaysaa baahiyaha labada shaqsi ee suuq geyn kara kuwaas oo ku dhex mari kara tan badan oo xog ah dhowr guji iyo shirkado xog-ogaal u ah oo u adeegsan kara aaladaha sayniska xogta isku dhafan si ay si qoto dheer ugu dhex muquurtaan waxyaabaha kala duwan.
Isdhexgalka Isticmaalka Wadaagga - Waxay u oggolaaneysaa la-hawlgalayaasha inay ku arkaan raadraaca & lambarrada dakhliga waqtiga-dhabta ah.
Link Links - U fidinta daabacayaasha CPM xayeysiiska saxda ah ee isticmaalaha saxda ah, oo ku saleysan algorithms-ka barashada mashiinka horumarsan.
Biilasha & Xoojinta - Ku dar lambaradaada bil kasta lammaanahaaga lambarada si aad ugu hesho biilal hufan oo dhakhso leh.
Iskuxirka Shabakada & Soo Dejinta otomaatiga ah - Si otomaatig ah u soo dhoofso oo u dejiso dalabyo badan oo shuraako ah.
Real-Waqtiga Otomaatiga ah CR Optimization - Si otomaatig ah u qaado tallaabo ku saleysan xogta waqtiga-dhabta ah si aad u hagaajiso taraafikada.
Bartilmaameedka Sare - Xaddidida waqtiga-dhabta ah ee geo, aaladaha, nooca taraafikada, kuwa xambaara, wixii xog kale ah ee caadada ah.
Warbixinta Aragtida - Baro qaababka, isbeddellada, iyo fursadaha ganacsi ee ku jira xogtaada, la wadaag asxaabtaada.
24/7 Sawirka Iskuxirka Raadinta - Aqoonso haddii xiriiriyaha raadraaca uu sax ku yahay dalab kasta oo nidaamkaaga ka mid ah.
Booqo Swaarm Wixii Macluumaad Dheeraad ah
Tags: waxqabadka xayeysiintamadal ad raadintaadtechadvertising digitalwaxqabadka suuqgeyntawaxqabadka suuqgeynta waxqabadkaswaarm